Constructionekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metro Line Construction ayaa mar labaad bilaabmaya | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulConstructionekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metro Line Construction ayaa mar labaad bilaabmaya
21 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
cekmekoy sancaktepe sultanbeyli metro khadka dhismaha mar labaad ayuu bilaabmayaa
Dhismaha khadka Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metro Line ayaa dib loo bilaabay; Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu ayaa faray in uu shaqo ka bilaabo Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metro Line, oo loo dhisay 2 sano. Xariiqda saldhigga 10,9 km-dheer ee 8, 26 ayaa fulin doonta qodista xaflad November November TBM ayaa loo yareynayaa tuneel mar kale.
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa dib u bilaabaysa mashruuc aan dhamaanin oo fududayn doona isku socodka waddooyinka dhinaca Anatolia isla markaana yarayn doona isgoysyada gawaarida ee labada dhinac. Shaqada dib ayaa loogu bilaabay Çekmeköy anc Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line, dhismaha kaas oo la joojiyay ku dhowaad 2 sano.
26 Noofambar 2019 ayaa lagu qaban doonaa 11.00 maalinta Salaasada iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweynaha IMM Ekrem İmamoğlu.de Sancaktepe Abdurrahman Gazi Station Station dhismaha waxaa lagu qabanayaa xaflad, shaqada qodista ayaa dib u dhigi doonta TBM mar kale tuneel. Wadooyinka iyo burooyinka xarunta 6 waxaa lagu qarin doonaa TBM (NATM habka tunnel). Hoolalka tigidhada ayaa la samayn doonaa oo laga demi doonaa. Barxada iyo hoolka tigidhada ee xarunta 2 waxaa lagu dhisi doonaa hanaan furan oo dhameystiran.
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line, oo ah sii wadida Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Line, wuxuu sii maraa xaafada Sarıgazi (xarunta isdhaxgalka), Isbitaalka Şehir, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa iyo Sultanbeyli Stations siday u kala horreeyaan. waxaa laga heli doonaa.
Khadadka leh xarunta 10,9-km 8, waqtiga safarku wuxuu socon doonaa daqiiqo 16 wuxuuna awoodi doonaa inuu ku qaado 65 kun oo rakaab ah hal jiho saacaddiiba. Iyada oo lagu dhisay tikniyoolajiyad casri-casri ah, saldhigyada khadka, oo u adeegi doona Mitirka Darawalnimada Automatic Automatic ah, ayaa adeegsan doona albaabo gogol dhererkiisu dhan yahay Saldhigga Samandıra, Awoodda gawaarida 336 oo si buuxda otomaatig u ah ayaa loo dhisi doonaa wadayaasha si ay u dhigtaan oo ay socodkooda ugu sii wataan metro.
Iyada oo heshiiska la saxeexay Oktoobar 2019 ee loogu talagalay bey Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line ee Çekmeköy, amaah ayaa laga bixiyay Deutsche Bank. Xariiqda ayaa loo qorsheeyay in la adeego rubuca ugu dambeeya ee 2022.
Dhismaha '2017'de' wuxuu ka bilaabmay mashruuca, 29 Diseembar 2017'de shaqada waxaa joojiyay IMM, Maarso 2018'de ayaa dib loo bilaabay. Si kastaba ha noqotee, Oktoobar dhismeedka 2018 wuxuu ahaa inuu mar labaad joojiyo sababtuna tahay bixinta bixin-la'aanta lacagaha. Heerka wax soo saarka jir ahaaneed ee khadka metelaadku waa qiyaastii 6.
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line Travel Times
- Çekmeköy - Sultanbeyli 16 daqiiqo
- Sarıgazi - Üsküdar 28 daqiiqo
- Sarıgazi - Ilmaha dhasha ee 7 min
- Sancaktepe - Levent 55,5 daqiiqo
- Sultanbeyli - Taksim 57,5 min
- Sancaktepe - Mecidiyeköy 55 daqiiqo
- Sultanbeyli - Yenikapı 50 daqiiqo
- Sultanbeyli - Göztepe 42 daqiiqo
La wado Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Subway…
Dhismaha Wadada-dhulka hoostiisa mara ee Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli…
Ogeysiiska Soo iibsiga: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli…
Dhismaha mitrooga Çekmeköy Sultanbeyli Ayaa Mar Kale Bilaabmay
Çekmeköy Sultanbeyli Metro Güzergahında Konut…
15 Diseembar 2017 Uskudar Umraniye Cekmekoy Sancaktepe…
Laga soo bilaabo Deutsche Bank ee Sultanbeyli Çekmeköy Subway…
EIA Waxaa Looga Baahan Yahay Wadada Wadada Kadıköy Sultanbeyli…
Dhismaha Tareenka Metro ee Pendik-Tuzla
Linesküdar-Yamanevler Metro Line Çekmeköy Extension…
3 Metro Line ayaa ku imaan doona Sancaktepe
Uysal: S Sancaktepe oo leh Mashaariicda Mashariicda YakT iyo Metro Line…
Kadıköy - Sultanbeyli Railway Nidaamka Wadada Wadnaha Mitirka…